I-Quarry Barn yinto yokuguqula i-Barn yokunethezeka. - I-Airbnb
I-Quarry Barn yinto yokuguqula i-Barn yokunethezeka.
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMichael & June
UMichael & June yi-Superhost
I-Quarry Barn ime kwindawo yobuhle bendalo obubalaseleyo enembono entle kuzo zonke iifestile. I-Barn ivaliwe kwaye inendawo yayo yokupaka iqinisekisa ukuba unendawo yabucala ebandakanya indawo yokuhlala
I-Barn sisicwangciso esivulekileyo kwaye inomoya wale mihla kodwa opholileyo. I-Barn ibandakanya yonke into ukonwabela eli khaya livela kwimvakalelo yasekhaya. IiVenkile eziLungileyo, iiPubs, iiNdawo zokutya zonke zikumgama weemayile ezimbalwa kwaye sibekwe kakuhle ukuba singaya kude ukonwabela imiba yenkcubeko.
I-Barn ivaliwe kwaye ilungele abantu abadala ababini. Ineyayo yokupaka yabucala kunye nokungena. Ibandakanya indawo yokuhlala enemibono emihle yezo ntsuku zinelanga.
4.98 · Izimvo eziyi-256
Ukuba uyathanda ukuba kude nayo yonke kodwa kungekhona kude neebhari, iivenkile zokutyela, iindawo ezisemaphandleni kunye nenkcubeko, zonke zilapha. Ngoku sifake i-WiFi ukuze iquke zonke izinto ozithandayo...iNetflix, iYouTube njl njl.
Sine-Quarry Cottage esecaleni kwendawo yayo yokupaka kwaye iquka isixhobo sokutshisa iinkuni. Zombini iBarn kunye neCottage zingaphakathi eNorthumberland kwaye ziyindawo entle yokukhenketha.
Umbuki zindwendwe ngu- Michael & June
Ndiyathanda ukubulisa iindwendwe xa ndifika xa ndikwazi ukunika ulwazi ngeBarn kunye nezibonelelo ezingqongileyo.